ULINDA ‘Mr Magic ‘ Sibiya ujabulela ukuthi uKhozi FM lugcine luvumile ukuthi akhulume emoyeni enze isikhangiso senkampani asebenza kuyona
KHETHA SANGWENI | July 5, 2020
OBEYISILOMO somsakazi woKhozi FM uLinda 'Mr Magic' Sibiya uthi umi ngomumo ukuxoxisana neSABC abuyeke kulo msakazo uma kungenzeka. Ubephawula emuva kokuvunyelwa ukwenza isikhangiso emoyeni ekubeni eke wachithwa phambilini kuthiwa uzodida abalaleli.
Isolezwe ngeSonto ngeledlule libike uLinda ekhononda ngokuvinjwa ukufaka isikhangiso emoyeni. Inkampani yakhe yakhala nangokuthi yayikhokhe uR100 000 ngesikhangiso emoyeni benethemba lokuthi sizodlalwa.
Izolo ohlelweni Itende Lomcimbi olusakazwa wuBheka “Beekay” Mchunu, uLinda ungenile wenza isikhangiso. Ethintwa uLinda uthe uyabonga kakhulu ukugcina emukeliwe wathi uthando lokusakaza lusekhona futhi umi ngomumo noma kungaqhamuka ithuba elincane lokusakaza.
“Ngisho bengathi angingene ebusuku ngenze ezemingcwabo kulungile ngoba mina impilo yami iyohlala iwuKhozi. Konke enginakho kungenxa yoKhozi. Anginanxa nalo namanje ngiyafisa sihlale phansi silungise,’’ kuchaza uLinda.
Uveze nokuthi selokhu ekhulumile emoyeni uthola izinkulungwane zemiqhafazo nezingcingo abantu behalalisa bethi akabuyele emsakazweni ayobajabulisa.
Uthe abanye bebembhalela ezinkundleni zokuxhumana bembuza ngendaba yakhe noKhoziFM. Uthe basazoqhubeka bafake ezinye izikhangiso ngaphansi kwenkampani ayisebenzelayo aphinde afake ezesikole sakhe esifundisa ukusakaza. Uveze nokuthi kunesinye isikhangiso obekufanele sidlale ohlelweni lwasebusuku olusakazwa wuSipho “DJ Sgqemeza” Mbatha kodwa sagcina singadlalanga kodwa usenethemba lokuthi sizodlalwa. ULinda uxoshwe emsakazweni ngo-2014 emuva kokuvela kwezinsolo zenkohlakalo kodwa walihamba icala wagcina ekhishwa phambili. Izinsolo zazihambisana nokuphambukisa imali okwakuthiwa kwenziwe uLinda.
Okhulumela iSABC uMmoni Seapolelo uthi abakaze bamchithe uLinda ukuzokhangisa emsakazweni bathi futhi isikhangiso sakhe sizwakele emoyeni saba yimizuzwana embalwa babambisene kahle naye.